Ukufa kuPamplona Ukugijima Kwezinkunzi
Ukufa ku-Running of the Bulls
Kusukela ukufa kokuqala ngo-1922, abantu abangu-15 bashonele ePamplona Running of the Bulls . UDaniel Jimeno Romero, owashona phakathi noPamplona Running of the Bulls ka-2009, ungumuntu omusha kakhulu ozofa ngesikhathi sonyaka.
UFermin Etxeberría u-Irañeta wabulala ngokulimala ngokushaya ngo-2003, kodwa ukufa okuphezulu kakhulu kwakunguMatewu Tassio, waseMelika oneminyaka engu-22 ubudala owashona ngo-1995.
Ukufa kukaTassio kwaqaphela umhlaba wonke ngoba wayengowokuphela kwesinye isizwe ongafa ngesikhathi egijime kusukela uGonzalo Bustinduy waseMexico eboshwe ukufa ngo-1935.
Nakuba abantu abafayo bengavamile, abantu abangu-50 kuya ku-100 belimale njalo ngonyaka. Ukugijima nezinkunzi emkhosini waseSan Fermin ePamplona kuwumsebenzi onobungozi ongenakunconywa kubathameli abaningi.
I-High-Profile Passing kaMatewu Tassio
Kulabagijimi abangu-15 abadlulile ku-Running of the Bulls ePamplona, ​​abayishumi nambili kubo bavela eSpain-11 kuwo abavela edolobheni eliseduze laseNararre. Kodwa-ke, ukufa okuye kwakunakekelwa kakhulu emhlabeni wonke kwakunguMelika Matthew Matsio.
Esikhathini esiningi, abantu baseSpain abashona abadlula ngesikhathi begijima bathola ukubhala okuncane mayelana nokufa kwabo, kodwa ukudlula kukaTassio kulo lonke elaseYurophu naseNyakatho Melika. Ngokusho kwe-BBC okushiwo ukufa kukaMathewu Tassio:
"Inkunzi yezilwane eyamdonsela isilinganiselwa esiyingisini ngetoni, yamshaya esiswini, yahlukanisa i-artery enkulu, yahlunga izinso zayo yamshaya isibindi, ngaphambi kokumphonsa emamitha angu-23 emoyeni."
Imininingwane ecacile kanye nokunakekelwa kwamazwe ngamazwe okudlulela kukaTassio kwakha ingxoxo yomhlaba wonke mayelana nokwandisa ukuphepha ekugijimeni ngokubheka ukwehla kukaTassio.
Omunye umlobi we-website ye-Bullrunners manje okuthiwa u-Tassio "awunakulungele ... njengoba kubonakaliswe ukuhamba kwakhe ngamafushane nge-sweater eboshwe okhalweni lwakhe, mhlawumbe ukugwema umoya webusuku obumnyama obusuku bokuqala."
Amathiphu Ekugijimeni Ngezinkunzi
Ukulimala kuvamile kakhulu, kanti nakuba ukufa kungavamile, kungagwenywa ngokulandela amathiphu ambalwa kanye nabadlali abagijimayo abaye bathatha iminyaka eminingi ngokubuka abanye belimale noma belimale ngesikhathi sokugijima nezinkunzi.
Endabeni kaTassio, intatheli yeBullrunners uthi iphutha lakhe elikhulu liphula umthetho " wokukhazimula we- encierro : uma uhla , hlala phansi." Lo mthetho yisinyathelo sokuqala sokugwema ukugonywa uphondo lwenkunzi yokushaja-ngokuhlala phansi, izimpondo zezinkunzi ziyowela phezu kwakho, kodwa ungase uqhubeke uqhubeka nabanye.
Olunye ukulimala okuvamile okwenzeka ngesikhathi sokugijima kungukuthi umuntu oyedwa wehla futhi abanye abaningana bawa phezu komunye, beka inqwaba. Uma iqembu labagijimi lihlukana futhi liqhubeka lihamba ngokushesha, izinkunzi zivame ukukhokha ngqo emgodini, ukugcoba abantu kulo.
Uma uhlela ukusebenza ngezinkunzi ePamplona, ​​qaphela ngokucophelela izingozi futhi uqiniseke ukuthi ulandela wonke amathiphu okuphepha ku-Running ne-Bulls ePamplona kuhlanganise nokugqoka izingubo ezifanele, ukwazi ukuthi ungadonsa kanjani izinkunzi uma zisondela kakhulu, futhi ulungiselela ngokwanele for sprint ubude sprint for impilo yakho.
Amasiko aseSpain kanye nemikhuba
Isiqondiso se-Carnival yaseSpain
Lapho Uzobona Flamenco eSpain
Isimo sezulu ngoMeyi eSpain
Indlela yokuya eSan Sebastián evela eFrance
I-Gibraltar City Guide
Thola Indawo yokudlela yase-Las Vegas
Izindawo eziphansi kunazo zonke ze-Scuba eziqinisekisiwe
Izincwadi Zokuthengiswa Kwezikole e-Oklahoma City
I-Inbounds I-Backcountry Style Isithuthuthu Esidlulele eStiamboat e-Colorado
Izindawo zeMiami Outlet kanye nezitolo zezimpahla
Amathiphu okukhetha izingxenye zezindiza ezifanele
Izipho Ezinhle ZikaKhisimusi ezivela ePoland
Buka izithombe zeDowntown Albuquerque
Amathiphu wezokuvakasha e-Los Angeles
I-Market Street yesithupha e-Tempe
8 Izinto Ezinhle Okufanele Zenziwe EFez, Morocco
I-Waikiki Rigger Sunset Hamba nge-Waikiki Beach